Emirà Arabo Mitambatra21 Aogositra 2018
Maraoka21 Aogositra 2018
Ejipta20 Aogositra 2018
Yemen: Olona miisa 40 no namoy ny ainy tamin'ny oram-batravatra
Yemen20 Aogositra 2018
Olona maherin'ny 40 no namoy ny ainy ary 30 eo ho eo no tsy hita tany Yemen rehefa avy namely an'i Hadhramout ny oram-be. Mitatitra antsika ny tantara i Omar Barsawad raha nanoratra tao amin'ny bilaogy Moments In Words From Hadhramout .
Fahazoana Rano Fisotro : Fifaninanana Iraisampirenena Famoronana Lahatsary ho an'ny “One Take”
Amerika Latina20 Aogositra 2018
[...] raha toa ny sasany mino fa ny rano dia tokony heverina ho filàna fototra fa tsy zo fototra, ny hafa indray, izay nahitàna an'i Etazonia, Shina, Kanadà, dia tsy mihevitra azy io ho tokony heverina ho toy ny zo fototra maha-olombelona.
Arabia Saodita17 Aogositra 2018
Torkia am-pitendrena milina…
Tiorkia16 Aogositra 2018
Talk Turkey nanoratra momba ny Etazonian'i Eorazia ho avy izay niteraka adihevitra tena mahaliana sy fanehoan-kevitra momba ny mpitsara Kiorda vaovao hisolo mpitsara Kiorda hafa mba hitsara an'i Saddam Hussein.
Ny herinandro tao amin'ny bilaogy Palestiniana: Voina nitranga teny amoron-dranomasina
Palestina16 Aogositra 2018
Vaovao hafa: Faly i Ohoud nandre fa nahavita ny zava-bita tsara indrindra tamin'ny Guiness World ny tanàndehiben'i Ramallah taorian'ny nanamboaran'ny toeram-pisakafoana iray ny sakafo Tabouleh lehibe indrindra. Maromaro ny vaovao voalaza ato...
Nampiseho miharihary ny fijalian'ny vondrom-piarahamonina Ahwazi vitsy an'isa ao Iran ny fahafatesan'ny zazalahy iray 12 taona
Iràna14 Aogositra 2018
Ny famonoan-tena nataon'i Meysam no tranga mampalahelo farany indrindra niseho teo amin'ny vondrom-piarahamonina Ahwazi, mponina vitsy an'isa monina any amin'ny faritra manankarena solika any atsimon'i Iran izay miatrika fahasarotana sy fanavakavahana ataon'ny manampahefana ao amin'ny firenena.